Vehivavy manokana | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Vehivavy manokana
Ny fitaovam-pamboovam-tena ataon'ny sela dia tena malaza amin'ny mponina amin'ny fahavaratra sy ny mponina ambanivohitra mandritra ny taona maro. Ary tsy mahagaga, satria ny tompon'ilay faritra dacha dia miatrika ny olana amin'ny fanesorana ranomandry amin'ny ririnina. Mazava ho azy, ity dia azo tanterahana amin'ny tanana, fitaovam-piadiana, saingy mila fotoana be ary mitaky ezaka ara-batana.
Fomba hisafidianana mpamatsy iray mpamatsy gazy manome: karazana mpamonjy mozika, modely malaza, mari-pifidianana
Any amin'ireo firenena maro any amin'ny Tontolon'ny Tandrefana dia misy ny filazana fa ny isan'ny tanimbary tsara indrindra dia azo ambara ho an'ireo izay manapaka ho azy mandritra ny 200 taona. Amin'izao fotoana izao dia sarotra ny mino fa tompona tompon-trano iray handany fotoana sarobidy toy izany. Tsy mahagaga izany, satria amin'ny fikarakarana sahaza, dia tsy hita afa-tsy herintaona aorian'ny fivoahana ny tara-maitso matevina sy matsiro.
Fitaovana zaridaina: ahoana no fomba hanaparitahana rojom-by amin'ny tànanao manokana
Ny tompom-barotra tsirairay dia tsy maintsy afaka manalefaka ny sehatry ny milina. Raha ny zava-misy, misy ireo toe-javatra izay tsy misy toerana hiandry fanampiana amin'io raharaha io: miantsoa ny tompony, na manalavitra azy. Amin'ity tranga ity dia mila ny tolo-kevitsika momba ny fanamafisana ny rojo vy. Inona no ilaina mba hanamafisana ny kesika, ahoana no hahatakarana fa mihasimba ny rojom-bolana Ny fiantohana ny asa lava ny fahitana anao dia ny fikojakojana izany.
Chainsaw manaratsy milina: fitsipika fiasa, karazana, toro-hevitra amin'ny fisafidianana
Ny chiansaw - ny fitaovana tsy azo ampiasaina amin'ny fanodinana hazo. Ampiasaina amin'ny fanesorana kofehy, hazo fisakafoanana ary katsaka. Ny fiasàna goavana amin'ny sehatry ny asa dia mitarika ho amin'ny fitafy azy. Mba hamerenana ny fitaovana hiasa, mila maranitra ny tratra. Ny fitaovana tsara indrindra ho an'ity dia ny milina manify.
Manaova fanorenana an-tanety: ny fototry ny olana sy ny fanafoanana azy ireo
Ny tompon'ny haran-dranomasina tsara tarehy sy maitso dia mety hiteraka olana rehefa miasa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanoro anao ny fomba fananganana fiara mpitondra gazy mozika amin'ny tananao manokana, ary koa hianatra ny antony mahazatra ny fisarahana amin'ity fitaovana ity. Ny endriky ny rafitra mozika an-tanimboly Ny ankamaroan'ny mowers dia mifehy amin'ny alàlan'ny fanosehana ny lamosina, saingy misy ihany koa ireo modely izay azo fehezina amin'ny fampiasana ny kodiarana.
Mametraka kavina amin'ny akanjom-bolo, ahoana ny fihenjanana ara-dalàna sy hanamarinana ny fihenjanana
Raha manana trompetra ao an-trano ianao, dia tokony ho fantatrao fa ilaina ny fikarakarana manokana izany. Ilaina ny manadio sy mamafa ny rojom-bolana, mba hanadio ny sivana amin'ny rivotra, ny solika ary ny kodiarana. Ary, mazava ho azy, mila manara-maso ny fihenjanana ao anaty fonja ianao, toy ny amin'ny fihenjanana ambany dia tsy ny manisy ratsy ny sehatra, fa ny fahasalamanao ihany koa raha mihodina ny haingam-pandeha.
Inona no atao hoe plough: ny drafitra sy ny tanjon'ny fitaovana
Mba hahazoana vokatra tsara dia ilaina ny manamboatra fepetra tsara ho an'ny zavamaniry sy ny tany. Ny tany dia tsy maintsy misy ny sakafo sy oksizenina. Mba hanaovana izany, ento ny valopy miaraka amin'ny fanampian'ny plough. Amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza izahay hoe inona ny karazana plough ary inona ny karazana azy dia matetika ampiasaina. Famaritana ny fitaovana Ny plough dia fitaovam-pambolena izay ampiasaina amin'ny fambolena ny tany.
Fomba hisafidianana mpiloka lomotra hanome, toro-hevitra ary tricks
Miaraka amin'ny fiandohan'ny ririnina tena izy, ho an'ny ankizy mahafinaritra, ny tendrombohitra ny lanezy dia miseho eny an-dalanay. Saingy tsy ny ririnina rehetra amin'ny ririnina. Tena niady saina momba ny olana momba ny trano fonenan'ny tranom-bahiny sy trano manokana. Ny fitaovana efa tranainy toy ny gorodona dia manan-danja, saingy tsara kokoa ny mampiasa fomba maoderina.
MTZ-892: endri-javatra ara-teknika sy fahaiza-manaon'ny traktera
Amin'izao fotoana izao, ny sehatry ny fambolena dia toy izany fa tsy azo atao mihitsy ny manao fitaovana manokana. Ny tena malaza dia karazana traktera samihafa, izay azo ampiasaina amin'ny karazana asa iray, ary koa ho an'ny maro. Andeha hodinihintsika ny filazalazana momba ny modela MTZ universal tracteur 892, ny endri-tsorany.
Ny asany lehibe sy ny toetoetra ara-teknika momba ny mpandidy T-170
Ao amin'ity lahatsoratra ity, dia hianatra momba ny fitaovam-pananganana mafy isika, izay antsoina hoe "malaza" amin'ny fananganana sy ny asa an-tselika, izay angano ny indostrian'ny Sovietika, dia ny Tendrombohitra T-170. Ny famaritana sy ny fanovàna ny sambo mpitondra entam-barotra T-170 dia fiara vita amin'ny asam-panjakana sy indostrialy, izay noforonina tamin'ny fanatsarana ny tantsambo t-130.
Toeram-pambolena rotary sy segondra ho an'ny motoblock no manao izany
Amin'ny sehatry ny fambolena, matetika isika dia mila miatrika ny tsimparifary, ary amin'io toe-javatra io dia tsy afaka manao izany isika raha tsy misy mpamatsy. Ao amin'ny lahatsorantsika dia hambaranay aminao ny karazana fitaovana sy ny fomba fanaovana ny milina mendri-kaja. Fanamboarana drafitra Raha ianao no tompon'ny tranon'ny firenena iray na trano fahavaratra, dia tsy maintsy hiatrika ahitra, tsilo ary hazo tsy misy ilana azy ianao.
Criteria amin'ny fisafidianana mpitrandraka mpamokatra herinaratra, fomba hisafidianana mpanampy iray hanome
Ity lahatsoratra ity dia momba ny fitaovana malaza toy ny mponin'ny fahavaratra sy ny tompon'ireo trano manokana ho toy ny mpitrandraka harona. Ny haben'ny androm-piainan'izy ireo amin'izao fotoana izao, noho izany dia rafitra sy nanamafisana ny fampahalalana rehetra. Manolotra soso-kevitra momba ny safidy amin'ity sokajy ity ianao.
Miracle Spade-Tug: Features sy tombontsoa amin'ny fampiasana fitaovana zaridaina
Ny fotoam-pambolena dia manomboka amin'ny famarotana ilay teti-bola. Ary tsy misy kitron-tsoavaly sy fiara hanaovana io asa io. Matetika ny asa ao amin'ilay tranokala dia miaraka amin'ny fanaintainana miverina ary ny ezaka ara-batana loatra. Fa amin'izao fotoana izao, ny fivoarana farany dia manampy amin'ny fampihenana ny fiasan'ny asa ary ny fampihenana ny workflow. Ary ny fitaovana fototra izay tokony ho an'ny zaridaina tsirairay dia ny môtô. "
Mini traktera ho an'ny tokantrano: ireo toetra ara-teknika "Uraltsa-220"
Ny minitraktikan'ny marika Uralets dia trakta kely novokarin'ny China sy Rosia. Ny fitaovana toy izany dia ampiasaina amin'ny fambolena sy fiompiana ho an'ny fampiasana trano sy fitaterana entana. Model Description Ny trakta mini Uralets-220 dia modely tranainy indrindra (misy Uralets-160 sy traktera minitra Uralets-180 ihany koa).
Inona no azon'ny MTZ 320 atao amin'ny fambolena?
Ankehitriny, miely patrana ny traktera, na inona na lehibe na fampiharana any amin'ny indostria isan-karazany. Ny iray amin'ireo solontenam-bahoaka malaza indrindra dia ny MTZ 320 traktera, izay an'ny karazam-bolo manerantany rehetra amin'ny karazana lasitra. MTZ 320: famaritana fohy momba ny "Belarus" dia manana formula 4m4 ary misy ao anaty fiarandalamby 0.6.
Mifidy tiro elektrika
Toeram-pambolena iray sy zaridaina an-jaridaina no misy gorodona marevaka sy tsara tarehy. Ny famotehana ny bozaka amim-pitandremana sy tsy misy hatak'andro dia mandany fotoana be loatra, noho izany dia mandroso amin'ny fandrosoana ny fandrosoana amin'ny fanomezana antsika karazana fitaovam-pitovozan-javamaniry. Mbola mijanona fotsiny ny mamaritra ny iray amin'izy ireo - mba hisafidianana mpametaveta, motokosa na trimmer.
Vladimir Tractor Plant: famaritana sy sarin'ny traktè T-30
Noho ny fandehan'ny fotoana sy ny akanjo tsy azo ihodivirana amin'ny tantsambo T-25, nanapa-kevitra ny hampiato ny famokarana ny T-25 ny mpitarika ny Volokano Vladimir Tractor ary manomboka dingana vaovao amin'ny famolavolana modely T-30 kokoa. "Vladimirets" T-30 Ny tantsaha T-30 dia fitaovana samihafa ampiasaina, fa tsy toy ny milina hafa amin'ny kilasiny, ny milina.
Fitiavana miaraka amin'ilay mini-traktè "Belarus-132n": ny toetran'ny teknika sy ny famaritana
Amin'ny fanombohan'ny lohataona, ny tantsaha tsirairay dia mampitombo ny isan'ny asa any an-tsaha. Tokony hambolena ny tany, tokony hatao ny dipoavatra ary tsy tokony hadinoina ny fanodinana potato. Mba hanamorana ny fampiharana ny asa be dia be eny an-kianja dia ny MTZ "Belarus-132n" no azo ampiasaina - masinina maro samihafa izay manatontosa asa be dia be amin'ny tany.
Fomba hisafidianana mpamboly motera, sarobidy sy azo itokisana
Владельцы больших участков часто присматриваются к "малой механизации". Ity teknika ity dia tonga lafatra amin'ny tranga raha efa mavesatra ny fikarakarana manara-penitra, ary mbola eo akaikin'ilay tranokala ny tantsaha. Mazava ho azy, tiako ny fitaovana toy izany mba hijerena karazana asa maro. Mianatra bebe kokoa momba ny fomba hisafidianana mpamboly sahaza ho an'ny trano lehibe iray isika.
Ahoana ny fomba hanamboaranao ny mpamboly potato amin'ny tananao
Ny olona miasa ao amin'ny taniny dia mahafantatra fa sarotra ny manangom-bokatra. Mba hanamorana io dingana io dia novolavolaina ny fitaovana toy ny mpitrandraka katsaka. Famaritana sy tanjon'ny fanorenana Ny mpitrandraka katsaka dia fitaovana iray izay mampihena ny fampiasana ny vatan'ny olona henjana amin'ny fambolena ovy, satria ampy hamenoana izany amin'ny mpandeha an-tongotra, hameno ny mpino, ary ny fitaovam-pitainganana dia hamakivaky ny hadilanana, hametraka azy ireo ary hiparitaka amin'ny tany, ary ny fitaovam-pitaovanao irery ihany Aza adino ny mamenina ny entana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Vehivavy manokana